မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နွေဦး ပြန်လာ Pneumatic Actuator > မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator
AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator များအတွက် 1. Indicator သည်။
AOX-P ကို၏လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး interface ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator NUMAR စံနှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသည်။ အဆိုပါ interface ကိုရန် NUMAR solenoid အဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
3. Fastener ။
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator များအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် 30-50% ဖြစ်ပါသည်
လူအားလုံးတို့သည် output ကိုလိမ်အားကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုကြီးမားဖြစ်ပါသည်
1. ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်မြင့်မားသောတိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
2. ကြှနျုပျတို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါပေးသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းmaterialsï¼များအတွက်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိသည်။
3. အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အချိန်မီအာရုံစိုက်, လျင်မြန်စွာ, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုအမိန့်တုံ့ပြန်မှုသေးငယ်တဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ, လျင်မြန်စွာ UPS, DHL, TNT မှတဆင့်တင်ပို့နိုင်ပြီးဖောက်သည်လည်းပင်လယ်, လေနှင့်အခြားနည်းလမ်းများအားဖြင့်တင်ပို့ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator ။
မေး: သင်ငါ့ကို AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic rotary actuator အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်